Health Archives - Pyone Pyone Lay
မိန်းကလေးများ အခန့်မသင့်ရင်အသက်ပါ ဆုံးရှုံးနိုင်သဖြင့် သတိပြုမိစေရန်အတွက်…
မိန်းကလေးများ အခန့်မသင့်ရင်အသက်ပါ ဆုံးရှုံးနိုင်သဖြင့် သတိပြုမိစေရန်အတွက်… အမျိုးသမီး မိန်းကလေးများ အခန့်မသင့်ရင် အသက်ပါ ဆုံးရှုံးနိုင်သဖြင့် သတိပြုမိစေရန် အတွက်ရှယ်ပေးခြင်း ဖြင့်ကူညီကြပါရှင့် … ။ ကျေးဇူးပြုပီး သင်သိသော အမျိုးသမီးများ ကိုမျှဝေပေးပါ .. ။ (သင်သည် အမျိုးသား တစ်ယောက်ဆိုပါက ယခုအကြောင်းရာ အားအမျိုးသမီးများ အတွက် မျှဝေပေးပါ..) အမျိုးသမီးများ ရာသီ ကာလ အတွင်း အောက်ပါ အချက်များ မလုပ်သင့်ပါ။ ဒါတွေကတော့ ၁။ ရာသီချိန် ကာလ အတွင်းရေခဲရေ ၊ ဆိုဒါမသောက်သုံးသင့်သလို အုန်းသီးလဲ မစားသင့်ပါ ။ သုတေသီ များ၏ လေ့လာချက် များအရ ရာသီကာလအတွင်း ရေခဲရေ …
တညင်းသီးကို ကြိုက်သူများ အတွက်
တညင်းသီးကို ကြိုက်သူများ အတွက် ဒေါက်တာ ခင်မောင်လွင်၏ ဟောပြောချက်တွင် တညင်းသီးကို ဓာတ်ခွဲ သုတေသန ပြုကြည့်သောအခါ လူကို အကျိုးပြုသည့် မည်သည့် အဟာရမျှမပါဝင်ဟု ဆိုသည်။၎င်းတွင် ပါဝင်သော ဖန်ချောင်းကဲ့သို့သော ကလာပ်စည်း များသည် ကျောက်ကပ်တွင် သွားပိတ်နိုင်သဖြင့် အန္တရာယ်ရှိသည်။ ကျောက်ကပ် ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ စားသင့်သည့် အသီးမဟုတ်။ အတိုင်းအတာ မရှိ။ လုံးဝ မစားသင့်သော အသီးမျိုးဖြစ်သည်ဟု တင်ပြထားသည်။သို့သော် တညင်းသီးကို မြန်မာတို့ စားသုံးခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ဝ ကျော်ခဲ့ပြီဟု သိရှိရသည်။ တညင်းသီးကို ကြိုက်သူများ အတွက် တင်ပြလိုသည်မှာ မြန်မာ့ရိုးရာ ဆေးပညာရှု့ထောင့်များအရ စေးထန် ပျစ်ချွဲသော အာပေါအာဗန္ဓရ အစာဖြစ်သည်။အာကာသကို ပျက်စေသဖြင့် …
ဆီးချို၊ ရေယုန်၊ ပန်းနာချောင်းဆိုးရောဂါ၊ လေရောဂါ၊ မိခင်များ နို့ထွက်စေရန်နှင့် အခြားများစွာ ဆေးဖက်ဝင်သော ခြံစည်းရိုးပေါ်က ကင်းပုံပင်
ဆီးချို၊ ရေယုန်၊ ပန်းနာချောင်းဆိုးရောဂါ၊ လေရောဂါ၊ မိခင်များ နို့ထွက်စေရန်နှင့် အခြားများစွာ ဆေးဖက်ဝင်သော ခြံစည်းရိုးပေါ်က ကင်းပုံပင် မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင် ပေါက်ရောက်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလေ့ကျပေါက်သည်။ သစ်ပင် ခြံစည်းရိုးတို့တွင်လည်း ပေါက်လေ့ရှိသည်။အသီး-လုံး၍ ရှည်မျောမျောပုံရှိသည်။ ၂ လက်မကျော်ခန့် ရှည်သည်။ အခွံ ပြောင်ချောပြီး အစိမ်းပေါ်တွင် အဖြူစင်းများရှိ၏။မှည့်သောအခါ လိမ္မော်နီရောင် ရှိသည်။ အစေ့လွန်းပုံရှိသည်။ နွေရော မိုးပါ သီးသော်လည်း မိုးရာသီတွင် ပိုသီးသည်။ အသုံးဝင်ပုံ-ပဉ္စငါးပါး ၊ အရွက် ၊ အသီး ၊ အမြစ်။ ပဉ္စငါးပါးအသုံးပြုပုံ- ၁။ ပင်စည်ပြုတ်ရည်ကို သလိပ်ရွှင်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုရာ၌ အထူးထင်ရှား၏။ အရွက်အသုံးပြုပုံ- ၁။ အရွက်စိမ်းကို …
ကျောက်ကပ်ကို ကျောက်မတည်အောင် ဒီလိုဆေးလို့ရပါတယ်
ကျောက်ကပ်ကို ကျောက်မတည်အောင် ဒီလိုဆေးလို့ရပါတယ် ကျောက်ကပ်ကို နံနံပင် နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ သဘာဝဆေးနဲ့ ဆေးကြောမယ်ကျောက်ကပ်က သွေးထဲရှိ အဆိပ်အတောက်တွေ အားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အမျှ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံတွေ ကျင့်သုံးလာတဲ့အတွက်ကြောင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အဆိပ်အတောက်တွေစုပြုံလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိ အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ကျောက်ကပ်မှာ ကျောက်တည် တာတွေ၊ အဆိပ်အတောက်တွေ များလာရင် ကျောက်ကပ် ပစ္စည်းတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် သဘာဝနည်းဖြင့် ကျောက်ကပ်ကို ဆေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နံနံပင်ကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့ အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နံနံပင်မှာ ဗီတာမင် K, C ,A နဲ့ ဖောလစ် အက်ဆစ်၊ သံဓာတ် စတာတွေပါဝင်တာကြောင့် ကျောက်ကပ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို …
ပင်စိမ်းပင်အိမ်မှာ စိုက်ပျိုးသင့်သော အကြောင်းရင်း
ပင်စိမ်းပင်အိမ်မှာ စိုက်ပျိုးသင့်သော အကြောင်းရင်း 1. ပင်စိမ်း အရွက် ကိုနေ တိုင်းစားပေးခြင်းအားဖြင့် အူလမ်းကြောင်း ဝမ်းဗိုက် နှင့် ပါးစပ်တွင်ဖြစ် တက်သောရောဂါ များ ကင်းဝေးပီး အစာခြေ စနစ် ကိုကောင်းမွန်စေ ပါသည် ။ 2. ပင်စိမ်း အရွက်ကို ရေထဲတွင် စိမ်ပြီး နေတိုင်းသောက် လာပါက ဆီးချိုရောဂါ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးသည် ။ 3. ပင်စိမ်း အရွက်ကို ပထမရက် ရေချိုးမည့်ရေတွင် စိမ် ထားပြီး နောက်နေ့ရေ ချိုးပါက ချွေးအနံ့ မထွက်အောင် ကာကွယ်ပေး သည် ။ 4. ပင်းစိမ်း အရွက်ကို သံပုရာရည်ရော ၍ကျိတ်ပြီး …
ခါးနာတဲ့ရောဂါဝေဒနာကို လုံးဝ အကင်းအရှင်း ပျောက်ကင်းစေတဲ့ တိုင်းရင်းဆေးနည်း အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ခါးနာ တယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အထိုင်များခြင်း အိပ်ဆက်ပုံ မမှန်ခြင်း နဲ့ တစ်ခြားဆိုးရွားတဲ့ ရောဂါတစ်ခုကြောင့်လည်း ခါးနာခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ခါးနာ ရောဂါက တကယ်ကို ဆိုးရွားသလို ခါးကိုက်ပြီးဆိုရင် ဘယ်လောက်ခံရခက်တယ်ဆိုတာ ဝေဒနာခံစားရတဲ့ သူတွေ အသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ခါးနာရောဂါခံစားရပြီ ဆိုတာနဲ့ သေချာ ကုသသင့်သလို နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်နိုင်တာကြောင့် အရမ်းကို ဆိုးရွားတဲ့ သေချာ ကုသဖို့ အတွက်ဆေးနည်းကောင်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနောက်တိုင်းဆေးပညာတွေ ထက်ပိုပြီးတော့ အစွမ်းထက်ပြီး ရှေးယခင် ကတည်းက အသုံးဝင်ခဲ့တဲ့ ခါးနာ သက်သာပျောက် ကင်းစေတဲ့ ဆေးနည်းလေးကို ပြန်လည် ဝေမျှပေးချင် …
အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ရဲ့လက်ဦးဆရာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မော်ဒယ်လောကရဲ့ဖခင်ကြှီး ကိုဌေးမင်းထွန်း ယနေ့ကွယ်လွန်
မြောက်ဒဂုံ ဒုက္ခသည် စခန်းက ပြည်သူများ ပြုံးပျော်ပီတိဖြစ်သွားစေလောက်တဲ့ အလှူလေး တစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ပြည်သူတွေ အာဟာရရှိစေဖို့ နွားနို့ဆန်ပြုတ်တွေ လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ သဇင်ထူးမြင့်တို့မိသားစု
ချစ်သူလေးရဲ့မွေးနေ့မှာ ထူးထူးခြားခြားဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ စွမ်းဇာနည်ရဲ့ကောင်မလေး
သူရဲကောင်းမလေးကြယ်စင် ထွက်သွားခဲ့တာ ယနေ့ဆိုရင် (၅)လပြည့်ခဲ့ပြီ